Stadia, sehatry ny lalao an-tserasera Google vaovao, tonga | Vaovao momba ny gadget
Tonga i Stadia, sehatry ny lalao an-tserasera Google vaovao
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Events, General, Presentations
Efa nanambara izany izahay, fotoana fohy monja talohan'io ilay olona goavambe niaraka tamin'ny renivohitra G dia liana tamin'ny lalao video. Ary toy ny vinavina tato ho ato dia tonga io fotoana io. stadio, sehatra vaovao ho an'ny "Gamers" izay hidiran'i Google tanteraka amin'ny tontolon'ny lalao video dia efa zava-misy. Ary na ho tsara na ho ratsy, tsy namela olona tsy miraika.
Finalmente Tsy hanana console Google izahay. Ho an'ny maro dia fahadisoam-panantenana izany satria tian'izy ireo ny hahita izay hain'i Google manamboatra sy mandray anjara amin'ity orinasa ity. Fa etsy ankilany, ny fiheverana ny fahaizana milalao ny lalao rehetra, amin'ny efijery rehetra ary amin'ny fotoana rehetra, dia nahasarika ny sain'ny olona ihany koa ary tian'ny maro. Fantatray fa tsy hiantso anay amin'ny famelabelaran-kevitra miaraka amin'ny zavatra tsy dia mahazatra i Google.
1 Tsy console i Stadia ... fa tianay izany
2 Zarao amin'izay tianao izao ny lalao ataonao
3 Tsy misy intsony ny fitaovana Stadia
4 Izay mbola tsy fantatsika momba an'i Stadia
Tsy console i Stadia ... fa tianay izany
Ny fahafantarana ny mety ananan'i Google eo amin'ny sehatra fampandrosoana dia nanantena zavatra manan-danja izahay. Nandritra ny herinandro maro dia nisy ny fanamarihana tamin'ny haino aman-jery isan-karazany fa ny zavatra hasehony antsika dia zavatra mitovy amin'izany Netflix an'ny lalao. Fa zavatra ity mbola tsy nazavaTsy mbola nisy resaka momba ny famandrihana na ny vidin'ny fanamiana ho an'ny lalao. Ka tsy afaka miteny mazava momba ny karazana serivisy azontsika ianteherana isika.
Inona no ezahan'ny Google halefa anay hevitra mazava be. Amin'ny ho avy, akaiky kokoa, tsy mila console izahay milalao ny lalao ankafizinay. Azontsika atao ny manaraka ny lalao atombontsika amin'ny solosaina finday amin'ny fahitalavitra. Ary rehefa mivoaka isika dia araho ny lalao iray ihany amin'ny fotoana nitovizantsika tamin'ny finday. Ireo tranga roa ireo dia toa fahombiazana tokoa, ary tianay izany. Fa amin'ny pitsopitsony maro hotondroina amin'izao fotoana izao.
Ny zava-baovao iray miresaka ny lalao gameplay izay hatolotr'i Stadia dia ny mety misy efijery zaraina. Mety hitranga arakaraka ny lalao, toa sarotra ankehitriny. Ny fahefana informatika takiana mba hanolorana ity safidy ity dia tsy tratra, na dia toa hanala ireo sakana ireo aza i Stadia atsy ho atsy ary ho raisin'ireo mpilalao.
Google te hanana ny tsara indrindra eo amin'ny tontolon'ny lalao video. Ary nanana orinasa izay refy ao amin'ity sehatra ity izy. Fa miaraka amin'ny anjara biriky azon'ireo orinasa kely eo amin'ny tontolon'ny lalao. Araka izany, Google dia manolotra ny vaovao rehetra noforonina ho an'ny mpamorona amin'ireo orinasa rehetra niara-niasa tamin'ny famoronana Stadia. Amin'izany fomba izany no ahazoana antoka fa, miaraka amin'ny mety rehetra G lehibe, miloka amin'ny famoronana atiny ho an'ity sehatra vaovao ity izy ireo.
Zarao amin'izay tianao izao ny lalao ataonao
Ny iray amin'ireo zavatra tena tian'ny mpankafy lalao dia mahay mizara ny lalao miaraka amin'ny ambiny. Ny fampidirana mpilalao hafa amin'ny lalao ataontsika dia hatao ho azy. Ary araka ny hitantsika tao amin'ilay horonantsary fampisehoana dia hisy be izany mora kokoa noho ny bokotra voatokana ho azy. Ny fahaizana manasa mpilalao hafa amin'ny lalaontsika dia ho mailaka sy haingana. Ary ambonin'izany rehetra izany afaka ataontsika amin'ny sehatra io mihitsy ary tsy mila mijanona ny lalao ataontsika.
Ny manana safidy toa izany amin'ny fampidirana mpilalao amin'ny lalao amin'ny sidina dia azon'ny sasany antoka fotsiny, ary Google dia eo aminy. Nambara nandritra ny famelabelarana omaly ihany koa fa hanasongadina ny sasany i Stadia torolàlana manokana ho an'ny lalao tsirairay. Zavatra efa noeritreretina tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Fa ny zavatra tsy nananantsika dia ny fampidirana ny mpitari-dalana ao amin'ny lalao. Ary izany dia hanampy antsika hanolotra «Vahaolana» amin'ny fotoana marina hanombohantsika. Fahombiazana iray hafa izay tiantsika.
Stadia, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao, dia tsy inona akory sehatra ho an'ny lalao miaraka amina ampahany foto-kevitra lehibe izay misy zavatra betsaka holazaina. Sehatra iray, eny, lehibe toy ny Google ihany koa. Ary mifototra amin'ireo ivon-tahiry izay ananan'i Google manerana ny planetantsika ity. Tsy mahagaga raha ny iray amin'ireo teny filamatra averimberiny indrindra ankehitriny dia "Ny ivon-kevitra dia ny sehatra misy anao".
Tsy misy intsony ny fitaovana Stadia
Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, ny fahafantarana fa tsy niloka tamin'ny famoronana console ara-batana Google ny sasany. Fa ny hevitra aroson'izy ireo tsy mila fitaovana hafa koa dia mialoha. Ireo mpankafy lalao sy mpampiasa teknolojia fototra kokoa dia mampiasa fitaovana roa, telo ary hatramin'ny efatra isan'andro. Farafaharatsiny, ary saika ilaina dia ampiasaintsika isan'andro ny smartphone. Manampy an'ity angamba isika amin'ny headphones sasany. Avy eo ny solosaina finday, ary raha te-hilalao isika, koa ny console.
Na dia tsy afaka manala singa iray tena ilaina aza isika hahatonga ny traikefa lalao ho valisoa tanteraka, ny mpanara-maso. Ny Stadia Controller, izay efa namoaka sary, tianay izany. Miaraka amin'ny famolavolana nentim-paharazana manafina ny haitao farany indrindra toa ny bokotra hizarana mivantana ny lalao amin'ny Youtube, na ilay iray mpanampy feo. Hanana izany famandrihana amin'ny alàlan'ny USB Type C, fifandraisana Wifi, seranan-tsambo headphone jack ary telo fananganana loko.
Hitanay ny fomba Fitaovana "esory" nefa tsy very safidy hafa, ary ny lalao dia tsy tena zava-baovao. Afaka milalao lalao mitovy amin'ny ankehitriny, ary maro hafa, nefa tsy mila ny console. Na ny televiziona izay ampifandraisintsika foana dia mampitombo ny fivezivezena. Ary rehefa naneho hevitra isika dia afaka manao izany nefa tsy resy ny lalao ary ny fanarahana ny teboka iray ihany dia vao mainka tsara kokoa. Tsy misy boaty, tsy misy fisintomana, tsy misy fetra.
Tianay foana ny mahita ny fandrosoana. Ary i Stadia dia tsy isalasalana fa ho eo alohan'ny sy aorian'ny indostrian'ny lalao video lehibe. Fandrosoana mialoha izay ho tsara ho an'ny mpampiasa hatrany. Ary izay miandry izahay de manompo ka ny mpifaninana mivantana indrindra toa ny Microsoft na Sony mandray an-tsoratra ny fanatsarana ary andramo ny mandresy azy ireo. Mazava izany miova ny indostria ary ho hitantsika raha afaka manaraka an'i Google amin'ity dingana vaovao ity ireo orinasa sisa tavela.
Izay mbola tsy fantatsika momba an'i Stadia
Aorian'ny fampisehoana somary mampiala voly sy mavitrika, fanontaniana maromaro no mijanona ao amin'ny fantsona. Mijanona miaraka izahay fanontaniana maromaro tena lehibe. Napetrak'i Google izahay hahafantatra bebe kokoa momba ny katalaogin'ny lalao hananan'i Stadia amin'ny fahavaratra. Saingy misy zavatra maro izay tsy nolazaina tamintsika, ary eo amin'izy ireo dia manan-danja lehibe. Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe mandritra ireo herinandro ireo, ary izany dia hitohy hijanona amin'ny rivotra, dia ny asa eo amin'ny sehatry ny asa eto Stadia.
Hiasa amin'ny famandrihana isam-bolana ve izy io? Tsy hainay raha afaka mampiasa Stadia izahay amin'ny alàlan'ny fandoavana sarany isam-bolana. Ary mazava ho azy, tsy fantatsika, raha izany, hoe ohatrinona no horesahintsika. Mbola tsy nazava izany. Ny safidy hafa, raha toa ka tsy serivisy fisoratana anarana io, dia mety hividy ny lalao, na mety hisy karazana "fanofana" isaky ny lalao. Hanohy haminavina izahay mandra-panazavan'ny Google anay bebe kokoa.
Iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra, tsy fantatray ny takiana farafahakeliny momba ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana fa mila mahay mampiasa Stadia isika. Indrindra raha raisina ny vahaolana izay resahina amin'ny fampisehoana 4K HDR amin'ny 60 FPS. Andininy manan-danja amin'ny, amin'ny fijerena ny fifandraisana ananantsika, hahafantarana raha afaka milalao amin'ny alàlan'ny sehatra Google vaovao isika.
Ary mazava ho azy, ho an'ny mpankafy rehetra ny tontolon'ny lalao dia ilaina ny fahalalana ny katalaogin'ny lalao azontsika isaina izany. Amin'io lafiny io dia manonona antsika amin'ny fahavaratra i Google. Ka mbola tsy maintsy hiandry amam-bolana maromaro isika vao hahalala ity tsy fantatra ity sy ny maro hafa izay najanona teny amin'ny rivotra omaly. Ny filokana amin'ny lampihazo izay mbola misy zavatra betsaka tokony ho fantatra, ary tena zava-dehibe dia toa mampidi-doza. Na dia tianay aza ny hevitra aseho ary ny fanatsarana dia lehibe amin'ny haavon'ny lalao sy ny haitao we miandry hatrany hahalala bebe kokoa momba an'i Stadia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tonga i Stadia, sehatry ny lalao an-tserasera Google vaovao
Vokatra Koogeek tsara indrindra amidy amin'ny Amazon
Ireo iPad vaovao ho an'ny taona 2019 avy amin'ny Apple dia antsoina hoe: iPad Air sy iPad mini